काठमाण्डौमा बालेनको अग्रता कायमै, सिर्जना सिंहसँग कडा टक्कर
काठमाण्डौ । काठमाण्डौ महानगरपालिकामा ३०० मतको गणना सकिएको छ । ३०० मत गनिसक्दा बालेन शाह र सिर्जना सिंहबीच निकै कडा टक्कर देखिएको छ । बालेन शाहले ७२ मतसहित अग्रता लिएका छन् भने उनलाई सिर्जना सिंहले ७० मतसहित पछ्याइरहेकी छिन् । शाह मेयरका स्वतन्त्र उम्मेद्वार हुन् भने सिंह कांग्रेसकी उम्मेद्वार हुन् । एमालेका मेयर पदका उम्मेद्वार...
काठमाण्डौको उपमेयरमा सुनिता डंगोलको फराकिलो अग्रता
काठमाण्डौ । सर्वाधिक चर्चामा रहेको काठमाण्डौ महानगरपालिकाको प्रारम्भिक मत परिणामअनुसार मेयरमा बालेन्द्र(बालेन) शाहले अग्रता लिइरहेको बेला उपमेयरमा सुनिता डंगोलको अग्रता निकै फराकिलो देखिएको छ । कुल ७५ मत गनिसक्दा एमालेबाट उपमेयरको उम्मेद्वार सुनिता डंगोल एक्लैले ५२ मत ल्याएकी छिन् । उनको अगाडि उपमेयरका अन्य प्रतिस्पर्धी निकै...
सल्यानको कुमाख- १ मा माओवादी केन्द्रको प्यानल नै विजयी
सुर्खेत । सल्यानको कुमाख गाउँपालिका– १ मा माओवादी केन्द्रका डिल्ली राना विजयी भएका छन् । उनले ६०८ मत ल्याएर कांग्रेस–एमाले गठबन्धनका उम्मेदवारलाई पराजित गरेका हुन् । काग्रेस–एमाले गठबन्धनको तर्फबाट कांग्रेस उम्मेदवार प्रेमबहादुर बुढाथोकीले ४८० मत प्राप्त गरेका छन् । यस्तै महिला वडा सदस्य, दलित महिला वडा सदस्य र खुला दुई...
इलाम । इलामको माङसेबुङ गाउँपालिका ४ मा नेकपा एमाले प्यानलै विजयी भएको छ । गठबन्धनका उम्मेद्वार दिलकुमार लिम्बुलाई ५४ मतान्तरले पराजित गर्दै एमालेका उम्मेद्वार नविन लिम्बु बिजयी भभएका हुन् । दिलकुमार लिम्बूले ३ सय २५ मत प्राप्त गरेका छन् । गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका दिलकुमार लिम्बूले २ सय ७१ मत पाएका छन् । त्यस्तै, स्वतन्त्र...
पोखरा महानगरको मतगणना दिउँसाे २ बजेदेखि
पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाको मतगणना शनिबार दिउँसो २ बजेदेखि सुरु हुने भएको छ । अहिले चलिरहेको सर्वदलीय बैठकले दिउँसो २ बजेबाट गणना सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार उम्मेद्वारले साढे १२ बजेसम्म आफ्ना प्रतिनिधि पठाइसक्नुपर्नेछ । साढे १ बजेसम्म मतपेटिका मिलाउने र २ बजेबाट गणना गरिने निर्वाचन...
विराटनगर महानगरमा कांग्रेसको सुरुवाती अग्रता
विराटनगर । नेपाली कांग्रेसमा कोइराला परिवारको गृहनगर विराटनगरमा कांग्रेसकै उम्मेद्वारले सुरुवाती अग्रता लिएका छन् । मतगणनामा खटिएका प्रतिनिधिहरुका अनुसार महानगरपालिकाको सुरुवाती मतपरिणामअनुसार सत्ता गठबन्धनको समेत समर्थनमा मेयरको उम्मेद्वार बनेका नागेश कोइरालाले २५ मतसहितको अग्रता लिएका छन् । उनलाई एमालेका तर्फबाट...
काठमाण्डौको मेयरमा बालेन शाहको अग्रता, धेरै उम्मेद्वार हुँदा मतगणना कछुवा गतिमा
काठमाण्डौ । सर्वाधिक चर्चामा रहेको काठमाण्डौ महानगरपालिकाको मतगणना सुरु भए पनि परिणाम आउन ढिलाई भइरहेको छ । काठमाण्डौमा मेयर उपमेयर पदका उम्मेद्वार धेरै रहेका कारण मतपरिणाममा ढिलाई भइरहेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । मतगणनामा खटिएका कर्मचारीहरुका अनुसार एउटा मतपत्र गणना गर्न १० मिनेटभन्दा बढी समय लागिरहेको छ । यसर्थ समेत...
भरतपुरमा पनि सुरु भयो मतगणना
काठमाण्डौ । स्थानीय निकाय निर्वाचनको सर्वाधिक चर्चामा रहेको चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा पनि मतगणना सुरू भएको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार भरतपुर वडानं. १ का तीन वटा मतपेटिका खोलेर मतगणना सुरू गरिएको छ । भरतपुर महानगरपालिकामा सत्ता गठबन्धनबाट रेनु दाहाल, नेकपा एमालेबाट विजय सुवेदी मेयर पदको उम्मेदवार छन्। मेयरमा...
हेटौडामा एमाले र पूर्व एमालेको रोचक भिडन्त, प्रारम्भिक परिणाम उल्टियो
काठमाण्डौ । हेटौडा उपमहानगरपालिकामा पूर्व एमाले र एमालेबीच कडा टक्कर देखिएको छ । यसअघिको निर्वाचनमा मेयरमा जित हात पारेको एमालेसँग पूर्व एमालेहरुको कडा टक्कर देखिएसँगै भिडन्त रोचक बन्दै गएको छ । सुरुवातमा एमालेका उम्मेद्वारले अग्रता लिइरहेको यो उपमहानगरमा अहिले भने नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वारले अग्रता लिएका छन्...
प्रारम्भिक रुझानको संकेत: रेणु दाहालले हार्ने सम्भावना !
काठमाण्डौ । हिजो भएको स्थानीय निकायको निर्वाचनको मतगणना भइरहेको छ । मतगणना भइरहेका ठाउँहरुबाट प्रारम्भिक मत परिणाम समेत आउन थालेका छन् । प्रारम्भिक मतपरिणामको रुझान हेर्दा कतिपय ठाउँमा सत्ता गठबन्धनभित्रै धोकाधडी भएको देखिएको छ । नेपाली कांग्रेसका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ता असन्तुष्ट रहे पनि केन्द्रले पेलेर भागबण्डा...
बुटवल: मेयर जितेको एमालेको अवस्था यो पटक भने दयनीय !
काठमाण्डौ । अघिल्लो चुनावमा मेयर जितेको नेकपा एमाले बुटवल उपमहानगरपालिकामा जारी यसपटकको मतगणनामा तेश्रो स्थानमा पुगेको छ । प्रारम्भिक मतपरिणामलाई हेर्ने हो भने यो पटक बुटवलमा एमालेको अवस्था निकै दयनीय देखिएको छ । हाल बुटवल उपमहानगरको वडानम्बर १ को ९०० मत गणना भइसकेको छ । ९०० मत गनिसक्दा सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार नेपाली...
चन्द्रागिरीमा कांग्रेसलाई उछिन्दै एमालेको अघि बढ्यो
काठमाण्डौ । कांग्रेसको अग्रतालाई तोड्दै काठमाण्डौका चन्द्रागिरि नगरपालिकामा नेकपा एमालेका उम्मेद्वारले आग्रता लिन थालेका छन्। मेयरमा एमालेका उम्मेद्वारले ३१० मतसहित अग्रता लिएका हुन् । दोस्रो स्थानमा नेपाली कांग्रेसका मेयरका उम्मेद्वारले २८९ मत पाएका छन्। यो नगरमा राप्रपाबाट मेयरका उम्मेद्वारले २४ मत पाएका छन् । यसैगरी,...
काठमाण्डौ । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग सीमा जोडिएको गाउँपालिका हो, मनाङको चामे । चामेवासीको सांस्कृतिक जीवन पद्धतिमा तिब्बती प्रभाव छ । र, चामेमै जिल्ला सदरमुकाम छ । मर्स्याङ्दी कोरिडोरमा पर्ने यही गाउँपालिकाबाट देशले पहिलो जननिर्वाचित अध्यक्ष पायो । ती अध्यक्ष हुन्– लोकेन्द्रबहादुर घले । प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेबाट...
ललितपुर । ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकामा पनि माओवादी कांग्रेसको गठबन्धन अघि देखिएको छ । गोदावरी नगरपालिकाकी निर्वाचन अधिकृत श्रद्धा रिजालका अनुसार गठबन्धनकातर्फबाट मेयरका उम्मेदवार गजेन्द्र महर्जनले ६ सय २५ मत ल्याएका छन् भने उपमेयरकी उम्मेदवार मुनाअधिकारीले ६ सय २६ मत प्राप्त गरेकी छिन् । एमालेका उम्मेदवार गम्भीर रानाले...
काठमाण्डौ । देशका ११ उपमहानगरपालिकामध्ये धेरैजसोमा मतगणना सुरु भएको छ । केही उपमहानगरपालिकाको मतगणनाका प्रारम्भिक मतपरिणाम पनि सार्वजनिक भइसकेका छन् । बुटवल, जनकपुर, धनगढी, हेटौडा, जितपुर सिमरा, धरान, इटहरी उपमहानगरपालिकामा मतगणना सुरु भइसकेको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकामा अघिल्लो पटक चुनाव जितेको एमालेले सुरुवातमै खराब नतिजा...